मुक्तिनाथ विकास बैंकको रु. १.२५ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको १.२५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज साउन १२ गते अन्तिम दिन रहेको छ। गत साउन ७ गतेबाट बैंकले ‘मुक्तिनाथ डिबेन्चर २०८४÷८५’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ। बैंकले १ हजार...
नबिल बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । नबिल बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज साउन १० गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकको ‘८% नबिल डिबेन्चर २०८५’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरिएको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ निष्कासन गरेको छ। कुल इकाइमध्ये१८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको...
मुक्तिनाथ विकास बैंकको रु. १.२५ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको १.२५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज साउन ७ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले ‘मुक्तिनाथ डिबेन्चर २०८४/८५’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल १२ लाख ५० हजार इकाइ ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। कुल इकाइमध्ये ७ लाख ५० हजार इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ५ लाख इकाइ...
कामना सेवा विकास बैंकले रु. १ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग माग्यो अनुमति
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकले ‘९ प्रतिशत केएसबीबीएल डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरेको हो। यो ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति माग्दै बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गत साउन ३ गते आवेदन पनि दिइसकेको छ। बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल १० लाख...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन साउन ५ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने भएको छ। बैंकले गत असार २८ गतेदेखि ‘लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्रमा आवेदन खुला गरेको थियो। यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा असार ३१ गते वा ढिलोमा साउन ११ गते हुने भनिएको थियो। तर मागअनुसार आवेदन नपरेकै कारण यो ऋणपत्रमा आवेदन...
सिभिल बैंकको ऋणपत्रको सीआईटीसँगै यी ३ क्यापिटलले प्रत्याभूति गर्ने
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडेले सार्वजानिक निष्कासन गर्न लागेको रु. ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रको नागरिक लगानी कोष (सीआईटी), प्रभु क्यापिटल, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटल लिमिटेडले प्रत्याभूति गर्ने भएका छन्। सिभिल बैंकले रु. १ हजार अंकित दरको ३० लाख इकाइ ‘९ प्रतिशत सिभिल बैंक डिबेन्चर २०८८’ को सीआईटीसँगै यी ३...
नबिल बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्र साउन १० बाट बिक्री खुला गरिने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । नबिल बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र यही साउन १० गतेबाट बिक्री खुला गरिने भएको छ। बैंकको ‘८ प्रतिशत नबिल डिबेन्चर २०८५’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरिने भएको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ निष्कासन गर्ने भएको हो। जसमा १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बिएको छ। बैंकले गत असार २८ गतेदेखि ‘लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्रमा आवेदन खुला गरेको छ। यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा असार ३१ गते वा ढिलोमा साउन ११ गते हुने भनिएको थियो। तर मागअनुसार आवेदन नपरेकै कारण यो ऋणपत्रमा अब साउन ११ गतेसम्म आवेदन...
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज (असार ३१ गते) बाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले ‘८.५ प्रतिशत माछापुच्छ्रे डिबेन्चर–२०८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ ऋणपत्र जारी गरेको छ। जसमा १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ भने स...
ज्योति विकास बैंकको रु. १.५ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंकको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज (असार ३० गते) अन्तिम दिन रहेको छ। गत असार २० गतेबाट जारी गरिएको ‘ज्योति विकास बैंक बन्ड–२०८७’ नामक ऋणपत्रको निष्कासन छिटोमा असार २३ गते र ढिलोमा साउन ३ गते बैंकिङ बन्द हुने भएको थियो। तर असार २३ गतेसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेकै कारण यो ऋणपत्रमा आवेदन...
साउन ७ बाट मुक्तिनाथ विकास बैंकको रु. १.२५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको १.२५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आउँदो साउन ७ गतेबाट निष्कासन हुने भएको छ। बैंकले ‘मुक्तिनाथ डिबेन्चर २०८४/८५’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल १२ लाख ५० हजार इकाइ ऋणपत्र निष्कासन गर्नेछ। कुल निष्कासन गरिने इकाइमध्ये ७ लाख ५० हजार इकाइ व्यक्तिगत...
लक्ष्मी बैंकको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज असार २८ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले ‘लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्रमा आवेदन खुला गरेको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। कुल इकाइमध्ये १२ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ८ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि...
माछापुच्छ्रे बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्र असार ३१ बाट निष्कासन गरिने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र यही असार ३१ गतेबाट बिक्री खुला गरिने भएको छ। बैंकले ‘८.५ प्रतिशत माछापुच्छ्रे डिबेन्चर–२०८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ ऋणपत्र जारी गर्नेछ। जसमा १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गरिनेछ। बाँकी १२ लाख...